You are here: Pyidaungsu Myanmar Mini-Encyclopedia / To A Better Health Article Collection / Diseases / ဘီပိုုး ကျန်းမာရေး ဗဟုုသုုတ
ဘီပိုုး ကျန်းမာရေး ဗဟုုသုုတ ဒါန အပိုုင်း ၁။
B ပိုုး ကြောင့် ဖြစ် လာ မည့် ဆိုု ကျိုး တွေ ဖြစ်သည့်
၁. အသည်း ခြောက်ခြင်း၊
၂. အသည်း အလုုပ် မလုုပ် နိုုင် တော့ ခြင်း၊ liver failure
၃. အသည်း ကင်ဆာ ကိုု ဘယ် လိုု ကာ ကွယ် ကြ မ လဲ ?
ကမ ္ဘာ ပေါ် မှာ မြန်မာပြည် ဟာ ဘီပိုုး အများဆုုံး နိုုင် ငံ တစ်ခုု ဖြစ် ပါ တယ်။
ကာကွယ်ဆေး တွေ လဲ ထိုုးကြ၊ ကျန်းမာရေး ဗဟုုသုုတ ပေး တွေ လဲ ပေး ကြ၊ ဘီပိုုး လူနာ တွေ ကိုု ကုု လဲ ကုု ပေး နေ ကြ သည့် အထဲ က ၊ တစ်နေ့ ထက် တစ်နေ့ ပိုု ပြီး များ လာ တာ ကိုု တွေ့ ရ ပါ တယ်။
အသည်း ကင်ဆာ ဟာ လည်း အလွန် များ လှ ပါ တယ်။
ကုုနေကျ၊ လုုပ်နေကျ၊ လုုပ်စဉ် များ ဟာ ဒီ ပြဿနာ ကိုု မဖြေရှင်း နိုုင် တာ သေ ချာ နေ ပါ တယ်။ ဒါ ကြောင့် လဲ ထိန်း မ နိုုင်၊ သိမ်း မရ ဖြစ် နေ တာ ပေါ့။
ပုုံး အပြင် ကိုု ထွက် ပြီး ကြည့် ဖိုု့ အချိန် တန် နေ ပါ ပြီ။
ကျွန်မ သာ ဆိုု ရင် ဘယ် ဆေး ခန်း မှာ မှ တကယ် မလိုု အပ် ပဲ ဆေး မ ထိုုး ပါ။ ဘာ ကြောင့် လဲ ဆိုု တော့ ဆေး ထိုုး အပ် က နေ အများ ဆုုံး ကူး စက် နိုုင် လိုု့ ဖြစ် ပါတယ်။
တစ်ခါ သုုံး အပ် တွေ သုုံး တယ် ဆိုု ပေ မဲ့၊ လောဘ ဦး ဆောင် နေ တဲ့ ခေတ် ကြီး မှာ ဘာ မှ အာမခံ ချက် မရှိ လိုု့ ဖြစ် ပါ တယ်။
ကျွန်မ တိုု့မြန်မာ လူ မျိုး တွေ အများစုု ဟာ ဆေး စွဲ နေ ကြ သူ များ လည်း မဟုုတ် ကြ ပါ ။ drug addicts
ဒါ ကြောင့် လဲ ကိုုယ့် ကိုုယ် ကိုု မူးယစ် ဆေးဝါး တွေ ကိုု မသန့် ရှင်း တဲ့ အပ် တွေ နဲ့ ပြန် ထိုုး နေ ကြ မယ် လည်း မ ထင် ပါ။
နောက်တစ်နည်း နဲ့ ရ နိုုင် တာ က တော့ ဘီပိုုး ရှိ နေ သည့် သွေး သွင်း ခံ ရ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။ blood transfusion
နေ မ ကောင်း ရင် ဆေး ပဲ သောက် ကြ ပါ။
အနောက် နိုုင်ငံ တွေ မှာ နေ မ ကောင်း လိုု့ ဆေး မ ထိုုး ကြ ပါ။ ဆေး ထိုုး တာ မြန်မာပြည် မှ လူနာ တွေ က သဘော ကြ ကြ ပါ တယ်။
ဒီ အယူ ဟာ အင် မ တန် မှား နေ တာ မိုု့ ကြိုးစား ပြီး ပြင် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
တစ်ချက် မှား တာ နဲ့ တစ်သက်စာ ဖူ လုုံ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
အစား အသောက် က ကူးစက် နိုုင် ဖိုု့ ခဲ ယဉ်း လှ ပါ တယ်။
တစ် အိမ် ထဲ မှာ အတူ နေ လိုု့ လဲ မကူးစက် နိုုင် ပါ။
သားသမီး ကိုု ဖက် ပြီး နမ်း ရှုံ့ ခြင်း မှ လည်း မကူး စက် နိုုင် ပါ။
အလုုပ် အတူ တူ လုုပ် နေ ကြ သည့်၊ လုုပ်ဖော် ကိုုင် ဖက် တွေ ကိုု လဲ မကူး နိုုင် ပါ။
လင်မယား ဆက်ဆံ ရင် တော့ သုုက်ရည် က နေ ကူး နိုုင် တာ မိုု့၊ ကာကွယ် မှု ယူ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
နောက် တစ် ချက် လူ တွေ ထင် နေ ကြ တာ က တော့၊ ဘီပိုုး ပဲ ဖြစ် စေ၊ စီပိုုး ပဲ ဖြစ် စေ၊ ကုုသ လိုု့ ပိုုး အကောင် ရေ မ ရှိ တော့ ဘူး ဆိုု ရင် ရောဂါ ပျောက် ကင်း ပြီ ဆိုု ပြီး ကျေ နပ် နေ ကြ ပါ တယ်။
ဘီပိုုး၊ စီပိုုး တွေမရှိ တော့ ဖူး၊ ပျောက် ကင်း ပြီ လိုု့ ပြော ပြီး အသည်း ကင်ဆာ ဖြစ် ပြီး သေ သွား သည့် လူ တွေ မြန်မာပြည် မှာ ကျွန်မ အသိ တွေ အတော် များများ ရှိ ကြ ပါ တယ်။
ဆရာဝန် တွေ လဲ ပါပါ တယ်။
ကျွန်မ ဆိုု လိုု ချင် တာ က တော့၊ ပိုုး ကြောင့် ကင်ဆာ ဖြစ် တာ မဟုုတ် ပဲ၊ ပိုုး ကိုု တိုုက်ခိုုက် ဖိုု့ ခန္ဓာကိုုယ် မှ ထုုတ် သော ယောင် ကိုုင်း ခြင်း ကိုု ဖြစ် စေ သည့် ဓာတ် များ ကြောင့် ဖြစ် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒါကြောင့် ပိုုးတစ်ခုု ထဲ ကိုု ပဲ အဓိက ထား ကုု ပြီး၊ ခန္ဓာကိုုယ် ယောင်ကိုုင်းခြင်း ကိုု ဘေးချိတ် ထား မယ် ဆိုု ရင် ကင်ဆာ က ဖြစ် နိုုင် ပါ သေး တယ်။ ကုုသ မှု ဟာ လည်း မပြည့်စုုံ သေး ပါ။
ကင်ဆာ ဖြစ် ခြင်း မှာ ခန္ဓာကိုုယ် ယောင်ကိုုင်း ခြင်း မှ စ လိုု့ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒါ ကြောင့် antioxidants တွေ သောက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
အသည်း ကိုု ပံ့ပိုုးပေး မဲ့ ဓာတ်စာ များ လည်း သောက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ ဥပမာ Milk Thistle
အသည်း အဆိပ် သင့် နိုုင် သော အရာ များ ကိုု ရှောင် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဥပမာ အရက် သောက် ခြင်း၊
ပတ်ဝန်းကျင် အဆိပ် များ၊
အောက်ပါ ဆေးဝါး များ.......
Paracetamol အထူး သဖြင့် အများကြီး သောက် သူ များ
TB ဆေး Isoniazid
Cholesterol ချ ဆေး statins
Methotrexate chemotherapy ဆေး၊ arthritis လူနာ အချို့ လည်း မှီဝဲ တတ် ပါ သည်။
Anticonvulsants တက် သည့် အခါ သောက် သည့် ဆေး များ
Psychiatric medications စိတ်ရောဂါ ဆေး များ
Cancer chemotherapy ကင်ဆာကုု သည့် အဆိပ်ဆေး များ
Antihypertensive agents သွေးတိုုးချဆေး များ
Cardiovascular drugs နှလုုံးရောဂါ ဆေး များ
Antidiabetic agents ဆီးချို ဆေး များ
Estrogens birth control pills ကိုုယ်ဝန် တားဆေး များ
Anabolic steroids ကိုုယ်ကာယ ကြီးထွား အောင် ထိုုး သည့် ဆေး များ
မှိုတက် သော အစာ များ အသည်း ကိုု ထိ ခိုုက် စေ ပါ သည်။
ဘီပိုုး ကျန်းမာရေး ဗဟုုသုုတ ဒါန အပိုုင်း ၂ ။
ဘီပိုုး အတွက် သွေးစစ် ပြီး အဖြေ များ ကိုု ကြည့် ပေး ဖိုု့ တောင်းဆိုု လာ သည့် မိတ်ဆွေ များ အတွက် နှင့် အခြား စိတ်ဝင်စားသူ များ အတွက် ပါ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဆရာဝန် မဟုုတ် သူ များ အတွက် နား လည် ဖိုု့ ခက် ပေ မဲ့ ကျွန်မ အတတ် နိုုင် ဆုုံး ၊ အရှင်း ဆုုံး တင် ပြ ထား ပေး ပါ တယ်။
တစ်ခေါက် နှင့် နား မလည် နိုုင် ရင် အခေါက်ခေါက် ပြန် ဖတ် စေ လိုု ပါ တယ်။
မြန်မာပြည် မှာ အလွန် အဖြစ်များ တာ မိုု့ နားလည် ရင် ကိုုယ့် အတွက် လည်း ကောင်း၊ သူ တစ်ပါး အကျိုး ကိုု ပါ ဆောင် ပေး နိုုင် မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဘီပိုုး ကိုု စစ် ဖိုု့ သွေး ဖောက် သည့် အခါ -----
အောက်ပါ အချက် အလက် များ ကိုု သေသေချာချာ နား လည် အောင် ပြော ပြ ပါ မယ်။
ဂရုု တစိုုက် နဲ့ လေ့ လာ ပြီး နား လည် မယ် ဆိုု ရင် အားလုုံး အတွက် အကျိုး ရှိ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဘီပိုုး ရ လိုုက် ပြီ ဆိုု ရင် ပထမ ဦးစွာ သွေး ထဲ မှာ ပေါ် လာ တာ က တော့ -----
၁. Hepatitis B surface antigen ( HBsAg )positive ဖြစ် ပါ တယ်။
သူ က ဘီပိုုး ရဲ့ အပြင်ဆုုံးအလွှာ မှာ ရှိ နေ တဲ့ ပရိုုတင်းဓာတ် ဖြစ် ပါ တယ်။
ရောဂါ လက္ခဏာ ဘာ မှ မ ပေါ် သေး မီ သူ က အရင်ဆုုံး ပေါ် ပါ တယ်။
သွေး ထဲ မှ ဒီ ပရိုုတင်းဓာတ် HBsAg ရှိ နေ ပြီ ဆိုု ရင်၊ သိ ထား ရ မဲ့ အချက် က ဘီ ပိုုး ကိုု ရ လိုုက် ပြီ ဆိုု တာ ပါ ပဲ။
လောလောဆည် ရ တာ လဲ ဖြစ် နိုုင် သ လိုု၊ အရင် က တစ် ချိန် ချိန် မှာ ရ ထား တာ လဲ ဖြစ် နိုုင် ပါ တယ်။
၂. အခုု လောလော ဆည် ရ တာ လား၊ အရင် တစ်ချိန် ချိန် က ရ ခဲ့ တာ လား ဆိုု တာ ခွဲ ခြား ဖိုု့ က တော့၊ နောက် တစ် မျိုး နဲ့ သွေးစစ် ကြည့် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
IgM antibody to hepatitis core antigen ( IgM anti-HBc လိုု့ ခေါ် ပါ တယ်။)
ဒီ IgM anti-HBc positive ဆိုု ရင် ၆လ အတွင်း မှာ ရ ရှိ လိုုက် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ အင်္ဂလိပ် လိုု ပြော ရ ရင် acute infection ပေါ့။
Negative ဆိုု ရင် အရင် က ရ ခဲ့ တဲ့ chronic infection ဖြစ် ပါ တယ်။
၃. HepatitisBeantigen ( HBeAg )
Positive ဖြစ် ရင် ခန္ဓာကိုုယ် ထဲ မှာ ဘီပိုုး ဟာ အတော်ပွား နေ တယ် ဆိုု တဲ့ အဓိပ္ဗါယ် ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒီ အချိန် မှာ အလွန် ကူးစက် တတ် ပါ တယ်။
၄. Hepatitis B core antibody ( anti- HBc )
Positive ဖြစ် ရင်၊ လောလောဆည် ရ ထား တဲ့ infection ဖြစ် နိုုင် သ လိုု အရင် က ရ ထား တဲ့ infection လဲ ဖြစ် နိုုင် ပါ တယ်။
ဒီ ဟာ positive ဖြစ်ရင် သွေး ထဲ မှာ တသက်လုုံး positive ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒီ Hepatitis B core antibody ဟာ အလွန် အရေး ကြီး ပါ တယ်။
ဘာ ကြောင့် လဲ ဆိုု တော့ ကိုုယ့် ဘာသာ ကိုုယ် ရ သွား တဲ့ infection လူ တွေ မှာ အမြဲ positive ဖြစ် ပြီး၊
hepatitis B ကာကွယ်ဆေးထိုုး ထား တဲ့ လူ တွေ မှာ အမြဲ negative ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒါ ကိုု ကြည့် ပြီး၊ အရင် က ရ ဖူး တဲ့ infection လား၊ ကာကွယ်ဆေး ထိုုး ထား လိုု့ ခန္ဓာကိုုယ် ထဲ မှာ antibodies လိုု့ ခေါ် တဲ့ ခုုခံ အား တွေ ရှိ နေ တာ လား ဆိုု တာ ခွဲ ခြား သိ နိုုင် ပါ တယ်။
၅. Hepatitis B surface antibody ( anti- HBs )
အရေးအကြီးဆုုံး မိုု့ နောက် ဆုုံး မှာ တင် ပြ ရ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။
ကျွန်မ အမြဲ ပြော နေ ကျ စကား က တော့၊ ခန္ဓာကိုုယ် ခုုခံအား ကောင်း ရ မယ် ဆိုု တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဘီပိုုး ကိုု ရ တဲ့ အခါ မှာ၊ ခုုခံအား မကောင်း ရင် ဒီ ပိုုး ကိုု တိုုက် ဖျက် ဖိုု့ အား မရှိ တာ ကြောင့် ခန္ဓာကိုုယ် က antibodies လိုု့ ခေါ် တဲ့ ရောဂါ ကိုု တိုုက် ဖျက် မဲ့ စစ်တပ် တစ်ခုု မရှိ ပါ။
ဒါ ကြောင့် မိုု့ လိုု့ ဘီပိုုး ကိုု၊ ကိုုယ် မနှိမ်နင်း နိုုင် တာ ကြောင့် ကိုုယ့် ခန္ဓာကိုုယ် ထဲ မှာ ဘီ ပိုုး နဲ့ ကျန် ရစ် ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ အင်္ဂလိပ် လိုု ပြော ပြ ရ ရင် chronic carrier state ဖြစ် သွား ပါ တယ်။
ဒါ ကြောင့် ခန္ဓာကိုုယ် ခုုခံ အား မ ကောင်း ရင် ၊ ဘီပိုုး ကိုု နှိမ် နင်း ရန် antibodies မရှိ ပါ။
ဒါ ကြောင့် ခုုခံ အား နည်း နေ သူ တွေ မှာ၊ လောလောဆည် ဘီပိုုး ရ သူ တွေ မှာ Hepatitis B surface antibody negative
chronic infection ကြာ မြင့် စွာ ရ ထား သူ တွေ မှာ လည်း hepatitis surface antibody negative.
ခုုခံ အား ကောင်း သူ တွေ ကြ တော့၊ ဘီပိုုး ကိုု တိုုက် ထုုတ် နိုုင် တာ ကြောင့် ဒီ ပိုုး လဲ မရှိ တော့ ပဲ၊ hepatitis B surface antibodies တစ်သက်လုုံး ရှိ သွား တာ မိုု့ နောက် ထပ် လဲ ဘီပိုုး မဝင် နိုုင် တော့ ပါ။ ခုုခံအားကောင်း သူ တွေ မှ ဒီ antibodies ဟာ positive ဖြစ် ပါ တယ်။
မြန်မာပြည် နဲ့ အကိုုက် ညီဆုုံး ၊အရေး ကြီး ဆုုံး အချက် တွေ က တော့ ------
မြန်မာပြည် က လူ အများစုု တွေ ဟာ ခန္ဓာကိုုယ် ခုုခံအား မကောင်း ကြ ပါ။
ဒါကြောင့် ဘီပိုုး ရ တဲ့ အခါ မှာ၊ ခုုခံ အား တစ် ခုု ဖြစ် တဲ့ antibodies တွေ မထုုတ် နိုုင် ကြ ပါ။
ဘီ ပိုုး ကိုု မသုုတ် သင် နိုုင် တာ ကြောင့်၊ ဘီပိုုး နဲ့ နာ တာ ရှည် ရောဂါ ဖြစ် ပြီး ကျန် ခဲ့ ကြ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
အဓိက၊ က တော့ ခန္ဓာကိုုယ် ခုုခံ အား ကောင်း အောင် လုုပ် ထား ရင် ၊ ဘီပိုုး နဲ့ နာ တာ ရှည် ရောဂါ မဖြစ် နိုုင် တော့ ပါ။
အသည်း ခြောက် ခြင်း၊ အသည်း အလုုပ် မလုုပ် နိုုင် တော့ ခြင်း၊ အသည်း ကင်ဆာ ဖြစ် ခြင်း မှာ လဲ လွတ် နိုုင် ကြ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
လောလောဆည် ဘီပိုုး ရ လိုုက် တဲ့ လူ တွေ က လဲ ခန္ဓာကိုုယ် ခုုခံအား ကိုု အထွတ် အထိပ် ဖြစ် နေ အောင် လုုပ် လိုုက် မယ် ဆိုု ရင် လဲ မှီ နိုုင် ပါ သေး တယ်။
အခြားဟာ တွေ မသောက် ချင် နေ၊ အဓိက သောက် ရ မှာ တွေ က တော့
၁. Vitamin D3 5000IU – 10,000 IU daily with I capsule of superK
၂. Thyroid hormone နည်း နေ ရင် ဖြည့် ပေး လိုုက် ပါ။
၃. Zinc 50 mgaday.
၄. Probiotics အနည်း ဆုုံး 20 billion countaday.
၅. VitaminC 1000 – 2000mgaday.
ဒါ ကိုု လိုုက်နာ သောက် သုုံး နိုုင် မယ် ဆိုု ရင် အလွန် ဆိုုး တဲ့ ဘီပိုုး နာတာရှည် ရောဂါ မှ လွတ် မြောက် နိုုင် မယ် လိုု့ ကျွန်မ အကြွင်း မဲ့ ယုုံ ကြည် ပါ တယ်။
ကျွန်မ ပြော တာ ကိုု သဘောတူ သူ တွေ ရှိ နိုုင် ပေ မဲ့၊ သဘော မတူ သူ တွေ လဲ ရှိ ကြ မှာ အ မှန် ပါ ပဲ။
ဘာ အရှုံး မှ လဲ မရှိ၊ ဥပါဒ် လဲ မရှိ တာ မိုု့၊ ဘယ် လိုု ပဲ ကြည့် ကြည့် လုုံဝ အရှုံး မရှိ နိုုင် ပါ။
ကျွန်မ ပြော တာ အဓိပ္ဗါယ် ရှိ တယ် ထင် ရင် လဲ လိုုက် နာ ကြ ရုုံ ပါ ပဲ။
သဘော မတူ ရင် လဲ ဒီ ရောဂါ ရေယဉ် ကြော မှာ၊ ဆက် ပြီး မြော ကြ နိုုင် ပါ တယ်။
ဒီပိုုး က မြန်မာပြည် မှာ အလွန် များ တာ ကြောင့် တစ်နေ့ မဟုုတ် တစ်နေ့ ကြုံ ရ မှာ အမှန် ပါ။
ကျွန်မ ကိုု မေး လာ သော မိတ်ဆွေ တစ်ဦး ကိုု စေတနာ အပြည့် နဲ့ သောက်သင့် သော ဗီတာမင် နဲ့ supplements များ ကိုု ညွှန် ကြား ခဲ့ ပါ တယ်။
သူ့ ရဲ့ သွေး ဖောက် စစ် တဲ့ အထဲ မှာ IgM ( ရောဂါ ရ တာ ဘယ် လောက် ကြာ ပြီ ဆိုု တာ ပြ တဲ့ ဟာ ) မ စစ် ထား ပါ။
သူ ပထမ ပြော တဲ့ ရာဇဝင် အရ သွေးလှူ ဘဏ် က ဘီပိုုး ရှိ တယ် ပြော လိုုက် တယ် ဆိုု တော့၊ ကျွန်မ က အခုု မှ ဖြစ် တဲ့ ကိစ္စ ထင် ပြီး နာတာရှည် ရောဂါ ကြီး နဲ့ မကျန် ခဲ့ အောင် အမြန် ဆုုံး သောက် သင့် တာ တွေ ညွှန် ပေး လိုုက် ပါ တယ်။
အခုု တော့ စာ ပြန် ရေး လာ တယ်။ ဖြစ် နေ တာ ၉ လ တောင် ရှိ ပြီ တဲ့။
ကျွန်မ ဆီ က အကြံ တောင်း ချင် တယ် ဆိုု ရင် တိတိကျကျ ပြော ပြ ရင် ကောင်း မယ် လိုု့ ထင် ပါ တယ်။
ဒါ တွေ ကြောင့် လဲ၊ ကျွန်မ လူ တွေ ကိုု ကျန်းမာ ရေး နဲ့ ပတ်သက် ပြီး အကြံဉာဏ် မ ပေး လိုု ပါ။
ကျွန်မ ပင်ပန်းခံ ပြီး ရေး ပြ နေ တာ၊ အခုု ထိ လူ တွေ သ ဘော မ ပေါက် ကြ သေး ပါ။
ဒီ ပြော တဲ့ ဟာ တွေ သောက် ခြင်း အား ဖြင့်၊ ကိုုယ့် ကိုုယ် ကိုု ဘီပိုုး နာ တာ ရှည် ရောဂါ မဖြစ် ရ အောင် တတ် နိုုင် သမျှ ကာ ကွယ် လိုုက် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ အသည်း ခြောက် ခြင်း၊ ယုုတ်စွ အဆုုံး အသည်း ကင်ဆာ ဖြစ် ပါ တယ်။
စောစော သောက် လေ ကိုုယ့် အတွက် ကောင်း လေ ဖြစ် ပါ တယ်။
ကျွန်မ လဲ ပြော ရ တာ မော ပါ ပြီ။
ကြိုက် ရာ၊ ထင် တာ သာ လုုပ် ကြ ပါ တော့။
ကျွန်မ ဦးတည် ချက်၊ ရည်ရွယ်ချက် ဟာ ကျန်းမာရေး ဗဟုုသုုတ ပေး ခြင်း သာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ကိုုယ့် ကျန်းမာရေး ကိုု ကိုုယ့် ဆရာဝန် နဲ့ ပဲ တိုုင် ပင် ပြီး ကုု သ စေ လိုု ပါ တယ်။